Wafdi uu hoggaaminayo Wasiirka Arrimaha Gudaha XFS oo gaaray Dhuusamareeb+Sawirro. – Radio Muqdisho
Wasiirka arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, mudane, Cabdi Maxamed Sabriye iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayay ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda dowlad goboleedka Galmudug.
Wasiirka ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Ugaas Nuur ku soo dhaweeyay Saraakiil ka tirsan Ciidamada Qalabka sida,maamulka magaalada Dhuusamareeb iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo wafdigiisa ayaa magaalada Dhuusamareeb u tegay sidii loo dhisi lahaa Galmudug loo dhanyahay,iyadoo ay xusid mudantahay in dhawaan gudigga farsamada maamul u sameynta dowlad goboleedka Galmudug ay soo saareen habraaca doorashada maamulka Galmudug.
Xildhibaannada labada aqal oo ka hadlay habraaca ansixinta dib u eegista Dastuurka “SAWIRRO”
Xildhibaannada labada aqal oo ka hadlay habraaca ansixinta dib u eegista Dastuurka "SAWIRRO"